အိုင်ကွန်နှင့် မောက်စ် ကာဆာပြုလုပ်ချင်သူများအတွက် Icon-Lover | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Software & Links » အိုင်ကွန်နှင့် မောက်စ် ကာဆာပြုလုပ်ချင်သူများအတွက် Icon-Lover
အိုင်ကွန်နှင့် မောက်စ် ကာဆာပြုလုပ်ချင်သူများအတွက် Icon-Lover
Posted by ဂျစ်စူ on Jun 26, 2011 in Software & Links |2comments
ဖိုဒါ Icons များ,လှုပ်ရှားနေတဲ့ Gif ပုံများ,လှုပ်ရှားနေတဲ့ မောက်စ် Cusor စတာတွေကို ကိုယ့်စိတ်ကြိုက် စမ်သပ်ပြုလုပ်
ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ ဆောဖ့်ဝဲလေးပါ။မောက်စ် က မြှားပုံစလေးတွေ အရမ်းရိုးနေပြီ၊ဒီဇိုင်းအသစ်နဲ့ကာဆာလေးတွေ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ချင်ရင်၊ကိုယ်ပိုင်ဓာတ်ပုံလေးတွေကို ဖိုဒါမှာ ပြောင်းထားချင်ရင်..ဒီလေးသုံးကြပါ။ဖိုင်ဆိုဒ်က သေးပေမဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကတော့ ဒီဆော့ဖ်ဝဲကို သုံးတတ်သလောက်ထိ အင်မတန်ကြီးပါတယ်။သုံးဖူးသူတိုင်းသိကြပါလိမ့်မည်။
IconLover helps you:
• manage icons, cursors, collections of icons for toolbars and blanks
• Createasemi-transparent icons, buttons, static and animated cursors for Windows
• Create and edit icons in standard and custom sizes, with color depths up to 32-bit True Color
• Create icons for programs, websites, desktop
• Create large icons for Windows Vista and Windows XP
• Use gradient and chess fill in the process of drawing
• Use layers in the draft Icons
• Useadrop shadow, opacity, smooth, negative, grayscale, colorize, rotate, roll and mirror
• Import and export ICO, BMP, JPEG, ANI, CUR, GIF, PNG, TGA, WMF, WBMP, XPM, XBM and Adobe Photoshop PSD Format
• Gatheracollection of icons for visibility
• Extract icons from executable files and libraries in Windows
• Change the icons in exe-files
• Search for icons on your disks
• Download the icons from the sites of collections of icons
• Convert or modify the set of icons at once
• Customize desktop and folders.(credit @ thewanderer90)
စမ်းသုံးကြည့်ဖူးသလောက်ပြောရရင်တော့ Converter သဘောမျိုးပါပဲ.
Save လုပ်တဲ့ နေရာမှာပဲ စကားပြောပါတယ်..
ဓာတ်ပုံ၊ကာဆာ၊အိုင်ကွန် တစ်ခုခုကို Icon lover>File>open မှတစ်ဆင့်(သို့ )Ctl+O ဖြင့် ဖွင့်လိုက်ပါ
ပြီးရင်..ပြင်ချင်တာရှိရင် ပြင်ပြီး Save လုပ်ခါနီးကျရင် ဘယ်ပုံစံနဲ့Save မလဲ ရှိပါတယ်။
မောက်စ် ကာဆာအဖြစ်သိမ်းချင်ရင် *.ani,*.cur
Animation gif လိုချင်ရင် *.gif
Icon ဆို *.ico,*.icpr ဆိုတာလေးတွေရွေးပြီး Save လုပ်လိုက်ယုံပါပဲ။
ဒီမှာ ၀က်မှီးလို လှုပ်တုပ်လှုပ်တုပ် Gif ပုံလေးကို Save လုပ်လိုက်ပါ..အဲဒီဟာကို Icon lover နဲ့ ဖွင့်ပြီး
*.ani အနေနဲ့ သိမ်းလိုက်မယ်ဆိုရင် Animated Cursor တစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။တခြားပုံတွေကိုလဲ ခုလိုပဲ ပြောင်းယူလို့ ရပါတယ်..။Mouse Cursor အလွယ်ပြောင်းဖို့ ကတော့
Run မှာ control mouse ဆိုပြီးရိုက်လိုက်ပါ။Pointer Tab ကိုသွား>Browse မှတစ်ဆင့် Save လုပ်ထားတဲ့ Cur,Ani ကိုရွေးပြီး Open and Apply ဆို ရပါဘီ.။
အရင်က ကိုယ်ပိုင် ကာဆာတစ်ခုလုပ်ချင်လို့ ရှာဖူးတယ်..အဆင်ပြေတဲ့ဟာ မတွေ့ မိဘူး။တွေ့ တဲဟာလဲ လုပ်ရတာ အဆင်မပြေဘူး..ဒါလေးတော့ ကြိုက်၏..။ဒါကြောင့်..ခလေးတွေကအစ ကလိနိုင်အောင် ထပ်ပြီး ရှင်းပြလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဆရာဂျီးများ ကတော့ ကျော်ဖတ်သွားကြပါလို့ ပဲ……..။
အစမ်းလုပ်ပေးထားတဲ့ Cursor လေးတွေ
Download မင်္ဂလာပါ ကာဆာ
Right Click>Save Link As ဖြင့်
Download မီးတောက် Cursor
Online မှ Mouse Cursor များရှာချင်ရင်..
အောက်ဆုံးအပိုဒ်မှာ စာနဲ့ပုံနဲ့ထပ်နေလို့ ဖတ်မရဘူးဖြစ်နေတယ်။
ဟုတ်..ပုံပေါ်မှာစာတွေရောက်နေတာ……..Edit လဲမရ..Delete လဲ မတွေ့ တာနဲ့ဒီတိုင်းပဲ ပစ်ထားလိုက်တာပါ………..အနော်ကလိထားတဲ့ မင်္ဂလာပါ ကာဆာလေး…………………Download မင်္ဂလာပါ ကာဆာRight click>Save Link As နဲ့ယူပြီး စမ်းကြည့်ပါဦး…………………….. ;)